Aretina Coronavirus Manomboka miantraika amin’ny toekaren’i Afrika
Na dia mbola vitsy aza ny olona voakasiky ny aretina Coronavirus aty Afrika dia efa misy akony ratsy amin’ny toekarena amin’ireo firenena afrikana maro ny vokatry ny valanaretina.
Ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny Azia dia efa manomboka mihisatra tanteraka. Raha ny any Afrika Atsimo ohatra dia hihemotra hatrany ny fandefasana ireo vokatra fambolena fanondrana mahazatra araka ny nambaran’ireo matihanina amin’io sehatra io. Ny ampahefatry ny fanondranana ny vokatra mahakasika ny fambolena ataon’i Afrika Atsimo anefa dia raisin’ny any Azia avokoa. Etsy an-daniny, efa nihena hatrany amin’ny 35% ny famarotana ny diamondra ataon’ny orinasa De Beers izay sinoa ny ankamaroan’ny mpanjifa. Raha ny any Cameroun indray dia manomboka miakatra ny vidin’ny trondro satria noraràna ny fanafarana sy ny fidiran’ny trondro avy any Sina noho ny tahotra ny aretina. Eo ihany koa ny kojakoja ilaina amin’ny moto sy ny moto mihitsy izay tsy tonga any Cameroun intsony noho ny fikatonan’ny orinasa maro any Sina. Raha mbola mitohy ny fanapahana ny fifandraisana amin’i Sina dia tombanana hahatratra hatrany amin’ny 400 tapitrisa dolara eo ny fantiantoky ny kaompaniam-pitateram-piaramanidina afrikanina. Anisan’ny voakasika ihany koa ny toekaren’i Gabon sy Congo amin’ireo fepetra mafy tsy maintsy noraisina ny amin’ny fitaterana an-dranomasina. Eo ihany koa ny fanafoanana ilay hetsika lehibe CEO Forum tokony hatao any Abidjan manomboka anio saingy nahemotra amin’ny fotoana tsy fantatra noho ny Coronavirus. Mahakasika an’i Nizeria indray dia efa feno fanahiana ny amin’ny ho mety fitotongan’ny vidina solika izy ireo satria tamin’ny herinandro lasa teo dia efa nihena hatrany amin’ny 15% ny vola niditra. Na i Madagasikara aza dia efa hita ho voakasika ihany koa satria maro be ireo mpandraharaha tokony hivezivezy mankany Sina kanefa tsy lasa ary efa velon-taraina ny amin’ny fatiantoka aterak’ity aretina Coronavirus ity .